ဤလှည့်ကွက်များ | ဖြင့် Google Maps မှ ပိုမိုရယူလိုက်ပါ။ Androidsis
Google Maps သည် Android တွင် အလွန်အရေးကြီးသော လမ်းကြောင်းပြအက်ပ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။. အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ Waze လိုမျိုး ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိလာပေမယ့်၊ အဲဒီထဲကမှ လှည့်ကွက်တချို့ကို သင်ပြထားပါတယ်။. ယနေ့သည် သင့်အား လှည့်ကွက်အချို့ကို ပြသမည့် Google အပလီကေးရှင်းကို အာရုံစိုက်ရမည့်အလှည့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ၎င်းကိုပိုမိုရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Google Maps သွားပြီဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များစွာကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ လများကုန်လွန်ခြင်းနှင့်အတူ။ ဒီတော့ အီးဖြစ်လာတယ်။n ၎င်း၏နယ်ပယ်တွင် အပြည့်စုံဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခု. အောက်မှာတင်ပြထားတဲ့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
1 ထွက်ခွာမည့်အချိန်ကို ရွေးချယ်ပါ။
3 အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသွားအလာကို အသုံးပြုပါ။
5 အခြား Google Maps သင်ခန်းစာများ
နေ့စဥ်အလုပ်သွားဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ သွားလည်မယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကို တိကျသေချာတဲ့ အကြိမ်ရေနဲ့ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Google Maps သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကဲ့သို့သော စိတ်ကြိုက်နေရာတစ်ခုကို တည်းဖြတ်နိုင်စေပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ လျှောက်လွှာကိုယ်တိုင်က ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်အချိန်က အိမ်ကနေထွက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်လဲဆိုတာ ပြပါ။အသွားအလာပေါ်မူတည်၍ ၊ လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ရှောင်ရှားရန် အလွန်အဆင်ပြေသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှောက်လွှာကို ဖွင့်၍မရ၊ ထို့နောက် Edit home and work section ကိုဝင်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဏ္ဍရှိ ဦးတည်ရာကို သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အက်ပ်က ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ လမ်းပေါ်ရှိ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအကြောင်း သတိပေးချက်များကို ပေးပို့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အက်ပ်၏ အကြောင်းကြားချက်များ ကဏ္ဍကို ဝင်ရောက်ပါ။ အဲဒီမှာ ပုံမှန် ခရီးစဉ်တွေ ဝင်လာပြီး Google Maps မှာ စသုံးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တွေရဲ့ ကြာချိန်ကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။
အပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏသွားရောက်လည်ပတ်သည့်နေရာများပေါ်မူတည်၍ အများသုံးလမ်းကြောင်းများကို အကြံပြုလိုပါက၊ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ယခင်အမှတ်မှာပြထားတဲ့ function ကို activate လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ ကျန်နေတဲ့ အဆင့်တွေက တကယ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Maps ဆက်တင်များကို ထည့်သွင်းပြီး Personal Content option ကို နှိပ်ပါ။. ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Habitual Routes ရွေးချယ်မှုကို အမှတ်အသားပြုရပါမည်။
သင့် Android ဖုန်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဤနည်းလမ်းနှစ်ခု၊ သင့်ဖုန်းတွင် တည်နေရာကို ဖွင့်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။Google က သိနိုင်တယ်။ ၎င်းကို အသက်သွင်းထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ မသေချာပါက၊ သင့်ဖုန်း၏ ဆက်တင်များအတွင်း တည်နေရာ ကဏ္ဍတွင် ၎င်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသွားအလာကို အသုံးပြုပါ။
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လမ်းပေါ်တွင် မကြာခဏဖြစ်နေပါက အပလီကေးရှင်းတွင် အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Maps သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသွားအလာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ရာကို ရောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို လျှောက်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကြည့်ရန်အတွက် သင်သည် အက်ပ်တွင်ရှာဖွေရန် ပန်းတိုင်အသစ်တစ်ခုသို့ဝင်ရသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင်သွားသောမြှားကိုနှိပ်ရပါမည်။
ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ Search bar တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအောက်မှာ အသွားအလာကို မြင်နိုင်ခြေကို ရှာတယ်။. ဤနည်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Maps ကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးတည်ရာသို့သွားရာလမ်းတွင် အချိန်တိုင်းအသွားအလာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အများကြီးမောင်းရင် အသုံးဝင်ဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုပါ။
ဦးတည်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များသည် Google Maps တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်း၏အိမ်မြှောင်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ချွတ်ယွင်းသွားနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ချိန်ညှိရန် အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ဒါမှ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းက တကယ်ကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင် အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကိုပြသသည့် အပြာရောင်အချက်ကို နှိပ်ရပါမည်။
သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကို ချိန်ညှိရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွေ့ရှိသည့် အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကို သုံးကြိမ်ရွှေ့ပြီး ရှစ်ကြိမ် လေထဲတွင် လှုပ်ရှားပါ။ ပြီးသောအခါ၊ အပလီကေးရှင်းသည် သံလိုက်အိမ်မြှောင် မည်မျှမှန်ကန်ကြောင်း ပြသမည်ဖြစ်သည်။ မြင့်တယ်လို့ပြောရင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
အခြား Google Maps သင်ခန်းစာများ
Android အတွက် Google Maps တွင်ဆိုဒ်များကိုတည်းဖြတ်ပြီးထည့်နည်း
Google Maps မှဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသောမြေပုံများကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း
ဂူဂဲလ်မြေပုံများတွင်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းရမည်နည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Google Maps မှပိုမိုရယူရန်လှည့်ကွက်